Ny marika dia lolo iray amin'ny ririnina ao an-trano
Amin'ny ririnina, ny bibikely rehetra dia matory ao amin'ny valanoranon'ny hazo hodi-kazo, ao anaty lavadrano ambany sy toeram-pialofana hafa. Ary ny lolo amin'io lafiny io dia tsy miavaka. Ary mbola mahagaga ihany koa ny mihaingo ny hatsaran-tarehy manjelatra amin'ny fotoana iray rehefa miparitaka eny amin'ny arabe ny orana ary latsaka ny oram-panala. Maro no liana amin'ilay lolo ao an-trano amin'ny ririnina ary inona no famantarana mifandray amin'izany.
Lolo amin'ny ririnina - famantarana tsara na ratsy?
Amin'ny lohataona, ny lohataona sy ny fararano amin'ny fararano, ny endriky ny lolozy ao an-trano dia raisina ho marika tsara. Ireo bibikely mampidi-doza sy tsara tarehy dia tsy mbola nahatsikaritra velively ny olona. Nino izy ireo fa ny fanahin'ireo razambe efa maty no nahatsikaritra azy. Saingy amin'ny ririnina dia lolo velona ny lolo velona, ​​fahadisoana ny natiora. Noho izany, ary ny toe-tsaina amin'izany dia ho hafa noho ny fampitandremana na ny fankahalana. Noho izany, ireo famantarana mifandray amin'ny lolozy izay niseho tao an-trano tamin'ny ririnina dia mety tsara sy ratsy. Ny zava-drehetra dia miankina amin'ny fomba fijerin'ny bibikely sy ny fomba fiasany.
Nahoana ny lolo no miseho ao an-trano amin'ny ririnina?
Raha manana lolo ao an-trano ianao amin'ny ririnina, ary tsy fantatrao hoe inona izany, jereo ny loko. Ny "mena maitso" manopy mena, jirony "ahi-bozaka" na bibikely misy loko mavomavo misy loko marevaka eo amin'ny lokon'ny elatra dia famantarana tsara. Noho izany, ao an-tranonao dia ho tonga fanambinana. Tsara indrindra raha tsy manandrana mandao ny trano ny lolozy , tsy manidina eny amin'ny varavarankely, fa mipetraka eny amin'ny zorony na miala sasatra amin'ny olona. Raha ity dia "fanolokoloana" na santionany misy elatra manga be maitso, dia manantena zavatra mahaliana sy vaovao aho, izay mendrika kokoa, alohanao. Raha tonga tampoka ao an-trano miaraka amin'ny elatry ny mainty mainty, mavokely na ordinatera ny loto, dia miandry ny olana. Ity vahiny tsy manan-tsahala ity dia tokony halefa eny an-dalambe, manokatra moramora amin'ny varavarankely. Ary na inona na inona, aza avela hipetraka eo amin'ny olona iray izy, na hianjadian'ny olona.
Inona no tokony ataoko raha manana nofy ratsy aho?
Nahoana no marary ratsy ny 13?
Nahoana isika no manana holatra?
Inona no nofinofin'ny cookie?
Nahoana no misy vehivavy manonofy lava mainty?
Ny fluidin'i Burov
Ahoana no hankalaza ny andron'ny mpianatra?
Miley Cyrus dia niresaka momba ny antony nipoahany tamin'i Liam Hemsworth
Ny alfèa amin'ny bevohoka
Ny vary varimbazaha "Rosary"
Kiraro avo lenta 2013
Inona no manampy ny propoly amin'ny toaka?
Ahoana no hanomezana zana-ketsa petunia?
Ahoana ny fomba hampianarana alika amin'ny lise?